Company profaịlụ - Xizi Igwe Mbuli Co., Ltd
XIZI mbuli CO., LTD bụ a kpam-ekesịpde enyemaka nke XIZI UHC, na ika aha "XIZI" (kwuru na dị ka "XIZI"). The ụlọ ọrụ zaa elu-ọgwụgwụ ahịa, aiming na ịrịba usoro mmepe nke mbuli azụmahịa nke XIZI UHC. The ika XIZI nwere ike ịbụ na e dere azụ ka afọ nke 1981. N'ihi ya, anya, nke a cross-narị afọ ika e were ihe karịrị afọ 30, na nyere kasị pụta ìhè ụlọ njem ngwọta maka n'elu 60 mba na mpaghara na ụwa, mgbe niile ndibọhọ ahịa ude na nwunye obi. XIZI bụ na-agbanwe agbanwe si amalite njedebe, na-esi ọnwụ na-aga azụ fundament, akpọpụta zuru okè ngwaahịa mgbe anọ ezi iji ozi.
Ụlọ ọrụ nke XIZI emi odude ke Lakeside nke Qingshan Lake maara dị ka "Green Silicon Valley". The ụlọ ọrụ nwere a edebanyere isi obodo nke RMB 2.155 nde yuan na banyere 3,000 ọrụ. Ọ bụ a na-eduga elu-ọgwụgwụ mbuli enterprise na China, na-etinye on ike imewe, R & D, rụpụta, ahịa, echichi na mgbe-sales ọrụ nke escalator ngwaahịa. Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ na-agụnye njem mbuli, panoramic mbuli, Machine roonless elevaror, ụlọ ọgwụ mbuli, ibu mbuli, escalator, na-akpụ akpụ walkway, home mbuli wdg, nke 8 usoro na n'elu 10 mbuli ụdị.
The ụlọ ọrụ emewo ka ụkwụ na ndị ụlọ ọrụ isua 35, nwere ike nnyocha sayensị na ọhụrụ ume. Ugbu a, ọ nwere ihe karịrị 300 oru pesonel, 60 patent oru ngo, undertakes 20 isi nnyocha na mmepe oru ngo na-ebupụta 3 ma ọ bụ 4 ọhụrụ ngwaahịa averagely kwa afọ. Ka ọ dịgodị, na ụlọ ọrụ corporately melite XIZI Research Institute of Zhejiang University na Zhejiang University. Irubere ọtụtụ na ama mahadum dị ka Tsinghua University na Shanghai Jiaotong University, XIZI eguzobewo ya R & D center, mmepụta & rụpụta center, atọ n'elu ikpo okwu nke àgwà nnyocha center na N'ezie nke na-achụ iche iche nke ngwaahịa, modernization nke n'ichepụta na ịmụba ọnụ ọgụgụ nke enterprise. Ịgbaso echiche nke "ọganihu na Times, n'ihu Innovation", ụlọ ọrụ na-mgbe na-edebe ike competitiveness.
The ụlọ ọrụ esesịn gbaara site ISO9001 Quality Management System, ISO14001 Environmental Management System, OHSAS18001 arụ Health na Safety Management System na ahịa nnabata asambodo nke kasị elu larịị na ụwa, dị ka OA asambodo maka EU ahịa nnabata nke na-eduga ngwaahịa, CSA asambodo maka North America ahịa nnabata, wdg The ụlọ ọrụ nwere n'ichepụta ikike nke elu larịị na anụ ụlọ ụlọ ọrụ na Ọkwa A echichi, mgbanwe na mmezi ikike.
The ahịa netwọk nke ụlọ ọrụ Nleta a emeri na ụkpụrụ nke "Otu ụlọ ọrụ, ise nnukwu mpaghara", na ngwaahịa ịgbatị n'elu n'akụkụ nile nke mba ahụ. XIZI guzobere 34 alaka ụlọ ọrụ na 28 ụlọ ọrụ dị iche iche na etiti obodo, dị ka Hangzhou, Jinan, Changsha, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Xi'an, Hefei na Nanjing, wdg, ayak enye "onye-nkwụsị" zuru-ozi ahịa. The mbuli na ngwaọrụ na-exported 70 mba na ebe tinyere Europe, Middle East, Southeast Asia na Australia, wdg di ugbu a, ụlọ ọrụ ike dị iche iche nanị ụlọ ọrụ na ogologo okwu na-emeri na-akwado mkpebi ndị mmekọ na kpụrụ a mma-guzobere oversea ahịa na ọrụ usoro.
"Obi ọrụ n'ihi na onye ọ bụla mbuli, enye nchebe na-adịgide adịgide na ngwaahịa na ahịa" bụ ọrụ nkà ihe ọmụma nke XIZI. The ụlọ ọrụ na-ekwusi na enterprise mmụọ nke persistent ịchụso nchekwa, arụmọrụ, ume-ịzọpụta na nkasi obi nke na ngwaahịa, ka enye ụwa klas technology, ngwaahịa na ọrụ ka ahịa.